Nandroaka mpiasa ambony tao amin’ny orinasan’ny fifandraisan-davitra MTN i Oganda noho izy ireo lazaina fa mitsikilo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2019 5:09 GMT
Trano hevan'ny vola amin'ny finday MTN ao Gulu Town, Oganda. Sary: Fiona Graham / WorldRemit (CC BY-SA 2.0)
Mandalo fotoan-tsarotra ny MTN, orinasan'ny fifandraisan-davitra malaza ao Ogandà taorian'ny nisamboran'ny polisy Ogandey ny taleny ara-barotra, Olivier Prentout ary avy eo noroahina hiverina any Frantsa, ny asabotsy 19 janoary 2019, rehefa avy natao fanadihadiana nandritra ny ora maro tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena tao Entebbe tamin'ny fiverenany avy nanao fitsidihana ara-barotra.
Ny Alatsinainy 21 Janoary, nosamborina ihany koa i Annie Tabura, teratany Roandey sady tale lehiben'ny varotra sy ny fitsinjarana ao amin'ny MTN rehefa tonga tao amin'ny foiben'ny orinasa ao Kololo, Kampala. Nalaina natao fanadihadiana tao amin'ny Sampana Fanadihadiana Manokana izy talohan'ny nandroahana azy tamin'io andro io ihany.
Tamin'ny tatitra nataon'ireo polisy Ogandey, nampangain'ny polisy ho mampiasa ny biraon'izy ireo mba hiditra amin'ny fampahalalam-baovao sy manao antso izay manohintohina ny fiarovam-pirenen'i Ogandà i Tabura sy Prentout.
“Hitanay fa tena nilaina ny nandalo dingana ara-dalàna tamin'ny fandroahana azy ireo,” hoy i Polly Namaye, mpitondratenin'ny polisy ao Oganda, tamin'ny tafatafa tamin'ny NTV.
Nanamafy i Namaye fa natao fanadihadiana izy roa ireo nandritra ny “fotoana fohy” ary noroahana satria “nihevitra izahay nandritra ny fanadihadiana fa raha mbola mijanona [ao Oganda] ry zareo, dia mety hiteraka…. olana sy fahasahiranana bebe kokoa.”
Nohamafisin'ny MTN Oganda tamin'ny sioka ny fandroahana azy ireo:
Samy noroahina hiala an'i Ogandà hamonjy ny firenen'izy ireo tsirairay avy, Frantsa sy Roandà Atoa Prentout sy Rtoa Bilenge.
Mbola vonona tanteraka hiasa sy hanaja ny lalàna ao amin'ny firenena ny MTN Oganda, miaraka amin'ny mpiasa rehetra.
Tamin'ny Alarobia 23 Janoary, nantsoina ho any amin'ny Departemanta Manokana misahana ny fanadihadiana i Elsa Mussolini, tale jeneraly misahana ny vola amin'ny finday mba atao fanadihadiana miaraka amin'ny filoha tale jeneraly sy tale jeneraly misahana ny raharahan'ny orinasa alohan'ny nandroahana an'i Mussolini tany Italia tamin'io andro io koa.
Voalaza fa nilaza tamin'ny mpiara-miasa taminy tamin'ny alalan'ny lahatsoratra i Mussolini fa niampanga azy ho nitarika herisetra ny polisy, sy hoe namindra vola be tany amin'ilay mpiangaly mozika sady mpanao lalàna Robert Kyagulanyi, fantatra amin'ny anarana hoe Bobi Wine, nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny hetra 1 isanjato amin'ny Vola amin'ny Finday sy ny hetra media sosialy isan'andro UGX 200. Iray tamin'ireo mpanao lalàna vitsivitsy nidina an-dalambe i Bobi Wine mba hanohitra ilay hetra, milaza fa natao hisolokiana ny tanora sy ny Ogandey mahantra izany.
Nitatitra ny gazety Ongadey Daily Monitor hoe:
Voalaza fa nanambara i Mussolini tamin'ny iray tamin'ireo teboka nandroahana azy fa nisy ifandraisany tamin'ilay mpanao lalàna ny fandroahana azy. Na izany aza, rehefa nanontaniana … raha toa ka nohadihadian'ny sampan-draharahan'ny fitsikilovana ny tale mpanatanteraka ao amin'ny MTN mikasika ny famatsiam-bola ireo hetsika ataon'i Atoa Kyagulanyi manohitra ny hetra amin'ny vola amin'ny finday, nilaza ny mpitondratenin'ny polisy, Fred Enanga hoe: ‘Tsy olan'ny fiarovam-pirenena izany.’
Tamin'ny Alarobia, tao anatin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Toekarena ao Davos, Soisa, nihaona tamin'ny filoha tale jeneralin'ny vondrona MTN, Rob Shuter ny filohan'i Ogandà, Yoweri Kaguta Museveni, izay nitondra ny firenena nandritra ny 33 taona, ary nilaza ny goavan'ny fifandraisandavitra fa nifantoka tamin'ny toeran'ny MTN manoloana ny fampandrosoana an'i Oganda ny fihaonana:
Nihaona tamin'ny filohan'i Oganda, Yoweri Museveni tao amin'ny Fihaonambe Manerantany momba ny Toekarena ny Filoha Tale Jeneralin'ny Vondrona MTN @ShuterRob mba hanamafy ny fahavononan'ny Vondrona MTN hiasa ao Oganda ary niresaka momba ny fivoarana vao haingana mikasika ny tsena #WEF2019
Na izany aza, tamin'ny sioka iray, nilaza ny filoha fa nanoro hevitra ny goavan'ny fifandraisandavitra izy mba hanome fahafahana ny Ogandey maro kokoa hividy petrabola ao amin'ny orinasa satria hampihena ny vesatry ny famindrana ny tombombarotra any an-tanindrazana (Afrika Atsimo) izany. Tsy niresaka momba ny fandroahana ireo mpila ravinahitra izy.
Nihaona tamin'ny filoha tale jeneralin'ny Vondrona MTN, Rob Shuter tao Davos, Soisa aho, niresaka taminy lohahevitra maromaro. Nanome toro-hevitra an'i @mtnug aho mba hiasa eo amin'ny Tsenam-bola ao Oganda ny petrapola mba hahafahan'ny Ogadey maromaro ho anisan'ny tompon'ny orinasa.
Talohan'ity zava-nitranga ity, dia nanao bemidina tao amin'ny biraon'ireo lohamilin'ny MTN Ogandà tamin'ny jolay 2018 ny polisy ary notapahana ireo lohamilina efatra. Tsy nisy fanambarana mazava raha misy ifandraisany tamin'ny bemidin'ny polisy na hafa tanteraka ireo fandroahana:
Ny MTN Oganda dia sampan'orinasan'ny MTN Group, orinasa fifandraisandavitra misandrahaka manerana ny firenena ary Afrikanina Tatsimo no tompony. Nisokatra tamin'ny taona 1998 ny MTN Oganda ary nankalaza ny faha-20 taonany tamin'ny volana oktobra lasa teo.